साउन ०८, २०७८ SG
काठमाडौं । कुनै गन्तव्यमा जाँदा हवाई जहाजभन्दा यात्रुबाहक सवारीसाधनको भाडा महंगो पर्छ भन्दा तपाईलाई पत्यार नलाग्नसक्छ ! तर, कोरोनाका कारण लगाइएको निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा अहिले देशमा यस्तै खालको बिडम्बनापूर्ण अवस्था यात्रुहरुले झेलिरहेका छन् । बिहीबार विराटनगरबाट काठमाडौं आउने हवाई भाडा प्रतिव्यक्ति २२ सयको हाराहारी छ । तर, बिहीबारैै मोरङबाट आउने बस र हायसले २५ सयदेखि ३ हजारसम्म यात्रुसँग भाडा असुलिरहेका छन् । मोरङबाट बिहीबार काठमाडौं आएकी सुधा अधिकारीले आफूले २५ सय रूपैयाँ भाडा तिरेको बताइन् ।
उनले भनिन् ‘आउनैपर्ने बाध्यता भएपछि २५ सय तिरेर काठमाडौं आएकी हुँ । मलाई कुनै टिकट पनि दिएनन् ।’ तपाईंलाई लाग्न सक्छ हवाई भाडा सस्तो छ त कोही किन गाडीमा अनेक हन्डर खाँदै यात्रा गर्छ ? तर, यो उनीहरूको वाध्यता हो । हवाईजहाजमा यात्रा गरिसकेपछि पनि आफ्नो घरसम्म पुग्न फेरि गाडी चढ्नैपर्छ । त्यसमा पनि उत्तिकै महंगो भाडा तिर्नुपर्ने हुँदा यात्रु थप दबाबमा पर्छन् । फेरि जहाज चढ्नका लागि पनि घरदेखि सदरमुकासम्म आउन जो कोहीलाई सजिलो हुँदैन । गाउँघरमा धेरैलाई त जहाजको भाडादरसमेत थाहा छैन र उनीहरू चुपचाप गाडीले मागेको भाडा तिरेर यात्रा गर्न विवश छन् । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा खबर छ।
विगतमा कडा लकडाउन हुँदा यातायात व्यवसायीले प्रतियात्रु ५ हजारसम्म लिएर काठमाडौं बाहिरका यात्रुलाई ओसारपसार गर्ने गर्थे । अहिले लकडाउन खुलेसँगै प्रतियात्रु भाडा दर २५ सयदेखि ३ हजारमा झरेको हो । त्यसो त सरकारले लामो दूरीका सार्वजानिक यात्रुवाहक सावारीसाधनको भाडा २८ प्रतिशतसम्म बढाउने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । तर, व्यवसायी आफैंले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । दोब्बर–तेब्बर भाडा असुलिरहेका उनीहरुलाई २८ प्रतिशत वृद्धिमा खासै चित्त बुझेको छैन । सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आइनसकेको भन्दै उनीहरु मनपरी भाडा असुलिरहेका छन् ।
सर्वसाधारणबाट चर्को भाडा लिइएको सम्वन्धमा यातायात व्यवसायीका संस्थाहरु भने अनभिज्ञता दर्शाउँछन् । नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्य भन्छन् ‘अहिले लामो दूरीका यातायात बन्द अवस्थामा छन् । यो बेलामा कसले गाडी कुदायो, कसले बढी भाडा लियो हामीलाई जानकारी हुँदैन । हाम्रा त सबै काउन्टरसमेत बन्द भएको अवस्था छ ।’ बिहीबारैै काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले लामा दूरीका यातायात खोल्ने विषयमा छलफल गर्न बोलाएको उनले जानकारी दिए । ‘कहिले खोल्ने भन्ने नै टुंगो नरहेको बेला कसले यातायात सञ्चालन ग¥यो र भाडा कति लियो भन्ने कुरा हामीले भन्दा पनि सरकारले अनुगमन गर्नु पर्ने विषय हो ।’
काडमाडौं–मोरङ हायस चलाउने एक सवारीधनीले आफूखुसी भाडा नलिएको दावी गरे । उनले भने, ‘हामीले यस्तो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि यात्रुलाई सेवा दिएका छौं । राति दुई बजे यात्रु लिएर सडक र प्रशासनको जोखिम मोल्दै हिँड्न हामीलाई पनि रहर छैन । जोखिममा लुकीछिपी सेवा दिनु पनि व्यवसायीको धर्म हो ।’ यता वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता योगराज कँडेल अहिले यात्रु धेरै नभएको र वर्खाको समय भएकाले भाडादर कम भएको बताउँछन् । उनका अनुसार यात्रुको चापअनुसार हवाई भाडा बढ्ने र घट्ने गर्छ । अहिले नियमित र पर्याप्त उडान भएकाले पनि हवाई भाडा सस्तिएको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले हवाई भाडामा मनपरि गर्न मिल्दैन र गर्दैनौं,’ कँडलले भने । गृह मन्त्रालयले भर्खरै लामा तथा छोटा दूरीका सवारी साधनले सञ्चालन गर्न कुनै अनुमति लिनु नपर्ने भन्दै सहज तरिकाले आउजाउ गर्ने वातावरण बनाउन जिप्रकालाई निर्देशन दिएको छ । यसअनुसार जिप्रकाले यातायात व्यवसायीसँग शुक्रबार छलफल गर्ने भएको छ ।
प्रकाशित : शुक्रबार, साउन ०८, २०७८०७:४२
ओलीले एकाएक युटर्न लिएपछि माधव नेपाल दबावमा !